Trailer - ithuluzi elula futhi enza izinto ezihlukahlukene, kodwa uqaphele ukuthi ithwala nomthwalo ezengeziwe ngabo. Ukuze usebenzise ukukhanya trailer ayibuyi ku inkinga ngawe, ulandele imidanti amiselwe ukushayela naye.
Okokuqala, akufanele sikhohlwe ukuthi imoto imoto ekuqaleni umuntu wadalwa ukuthutha abantu. Uma okufanayo kuye unamathisele umthwalo ezengeziwe, lutho esibulalayo kwenzeka, kodwa okubakhona unyathela amabhuleki imoto, abaphatha, UKUQINA izingxenye kanye izingxenye, nophethiloli kahle iconsi kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ukuthenga Tata brand yasekhaya noma umkhiqizo - iphuzu lapha liwukuthi imoto eya umthwalo eyengeziwe kanye eside. Lapho ushayela nge trailer umgibeli nikhuphukeleni ngekukhula izitimela ngomkhumbi, kunzima ukuphatha uma kuyomfica izimoto ezinkulu. maneuverability ajwayelekile futhi permeability elinganiselwe, kukhuphuke ukusheshisa isikhathi nokuhlale unyathela amabhuleki, ibanga - ngakho umshayeli kumelwe niqaphelisise futhi baqaphe.
Okwesibili, imoto nge trailer zibangele amahloni nabanye abasebenzisi bomgwaqo. Londoloza ibanga lakho futhi ngezikhawu lateral, baqaphe futhi ngomqondo ovulekile ukuhlola isimo - lokhu kuyokusiza ugweme izinkinga eziningi. Aqondisa ngokuvamile itholakala kuphela uma ngokweqile isitokwe isikhathi ukutholakala amabanga ezinkulu ezanele ukusayinda amajika. I motion iqala ngaphandle jerks. Ngesivinini spurts kukunye kuholela ekwenteni isondo ilele futhi ngaphambi kwesikhathi isondo ukuguga, ngokweqile petrol kanye ukulimala ukudluliswa izingxenye futhi towbars, isondo slippage phezu izingxenye zomgwaqo amanzi.
Okwesithathu, akufanele sedlule isivinini avumelekile kumphakathi ukunyakaza. Ekugcineni, Kel-berg trailer ukudayiswa yizinkampani ezikhethekile kokuba kwakudingeka ukuze ukukunikeza amathuba angeziwe hhayi ukudala izinkinga owengeziwe, lapho azinakugwenywa non-ngokuvumelana nemithetho ukushayela. Ukuze ugweme skidding trailer "alo" isitimela komgwaqo, gwema unyathela amabhuleki okungazelelwe emigwaqeni ezishelelayo ezineqhwa ukunciphisa ijubane futhi uqaphele owengeziwe.
Watch out for uhlamvu ukuhamba trailer endleleni. Ukunikina, ukudikiza noma ukuhoxiswa ukhombise bafake ibha donsa noma ukumiswa, ukusatshalaliswa engalingani umthwalo, ingcindezi lokungakeneli isondo, bafake engalingani. Nokho, uma esibukweni ungabona amasondo trailer.
"Volkswagen T4 Transporter": ukubuyekezwa, izithombe, izincazelo
Yiziphi amabombo ukuze ezinamasondo? Amathiphu namacebo